IINKXASO-MALI ZE-FOREX: NGOKU LIXESHA LOKUTYALA. INDLELA YOKUFUNDA
Ingqwalaselo kubacebisi beNtengiso ye Forex
ISIKHOKELO KWIIMALI ZANGAPHAMBILI NOTYALO-MALI
IINKXASO-MALI ZE-FOREX: NGOKU LIXESHA LOKUTYALA.
Eli lelona xesha lilungileyo lokutyala kwiiNgxowa-mali ze-Forex. Ngenxa yokuba iimarike ziphezulu idibeneyo, ayikaze ibaluleke ngakumbi okanye icelomngeni ekwenzeni iphothifoliyo yotyalo-mali eyahlukeneyo. Ukutyala imali kwingxowa-mali elawulwa kakuhle ye-Forex okanye kwiakhawunti yemali elawulwayo kunokulungisa amanyathelo amabi kurhwebo lwehlabathi kunye neemarike zebond. Kwakhona, iimveliso ezilawulwayo ze-Forex zinokubonelela ngezivuno ezibonakalayo xa ezinye iimarike zihamba zisezantsi ukungazinzi amaxesha. Ngelixa ukungazinzi kunokuzisa umngcipheko, kunokuvula imivuzo ebalulekileyo.
KUTHENI I-FOREX FUNDS? NDANDISELE NDIYAZI UKUZE NDITHENGISE
Iimali ze-Forex ezilawulwa liqonga lokurhweba ngeakhawunti.
Kanye njenge ipotifoliyo eyahlukileyo Inezinto zokubamba ezahlukeneyo, amacebo, iiklasi zeasethi, kunye neendidi ezahlukeneyo zotyalo-mali kunye nezixhobo, kufanelekile ukuba iphothifoliyo yotshintshiselwano lwangaphandle.
Abarhwebi abaneepotifoliyo zemali ezibaluleke kakhulu banokuba neeakhawunti ezininzi, kunye nolwakhiwo olwahlukeneyo njengoko kuchaziwe apha ngasentla, ukongeza kurhwebo lwakho kunye nokuqhuba iirobhothi okanye imiqondiso yokurhweba ngokwabo.
Ukulawulwa kweeAkhawunti ze-Forex ngokubanzi kuthetha ukuba umtyali mali uvumela umphathi wemali ukuba athengise iakhawunti ye-Forex yomtyali mali, ebanjwe egameni lomtyali mali kwaye ngokukhethekileyo kumrhwebi olawulwayo. Ugunyaziso lokurhweba lunikezelwa kumandla athile egqwetha (i-POA), evumela kuphela urhwebo (hayi ukurhoxiswa okanye ukufakwa kwemali) ngumphathi wengxowa-mali de oko kugunyaziswa kurhoxiswe okanye umtyali-mali akhuphe imali.
Abatyalomali banqwenela ukungaguquguquki kwintsebenzo. Umsebenzi oqikelelweyo lolona phawu lubalulekileyo kwirekhodi yengxelo yomphathi wengxowa mali. Masithi irekhodi lomrhwebi lomkhondo liyanxaxha ekusebenzeni kwembali. Kwimeko apho, abatyali mali banokuba nexhala lokuba indlela yomrhwebi itshintshile okanye ingasasebenzi, enokubangela ukuba abatyali mali bahlawulele yonke okanye inxenye yemali yabo. Abatyalomali abanamava be-Forex bayayiqonda into yokuba irekhodi elide elinembuyekezo engaguquguqukiyo iminyaka emininzi akukho siqinisekiso seziphumo ezihambelanayo neziyinzuzo kwixesha elizayo; ngenxa yoko, abatyali mali kufuneka bahlale belandela intsebenzo yabarhwebi babo kwaye bayithelekise neziphumo zembali. Ukuphonononga ukusebenza kwembali xa kuthelekiswa nembuyekezo yexesha-lokwenyani kufuneka kube yinxalenye yomtyali mali jikelele uphando olusebenzayo inkqubo.
UKWENZA IZIGQIBO EZINZIMA KULULA
Zininzi ezinye izinto ezahlulayo, zombini ubuninzi kunye nomgangatho, oya kuba kufanelekile kumtyali-mali ukuba aphande ukuba ngubani onokuthi avule i-akhawunti elawulwa yi-Forex okanye atyale imali kwingxowa-mali yokurhweba ethengisa iimali.
Umtyalomali unokwahluka ngokwenza ipotifoliyo enkulu ye-Forex okanye avelise iphothifoliyo yee-asethi ezininzi apho ingxowa-mali ye-Forex izakusebenza njengenye yezezimali zotyalo mali lwangaphandle. I-Forex ephethwe ayifanelanga ukuba ibe sisixhobo sokugcina imali yomtyali mali iphela. Oku kufanele ukuba kuyinyani ngaphandle kwesixa sedola okanye ukuba ingxowa-mali inamalini kwii-Asethi eziphantsi koLawulo (AUM). Endaweni yoko, kufanele ukuba ibonakalise ipesenti yokubamba otyalomali abelwe ukwahlula-hlula ngelixa ejonga inzuzo / umngcipheko onokubakho.
UKUVULA I-AKHAWUNTI NENGXOWA-MALI INGXELO YENGXOWA-MALI YE-FOREX. YINTONI ELANDELAYO? NDIFANELE NDILINDELE UKUBA NDITYALA?
Uninzi lwetekhnoloji eqhutywa kwi-Intanethi ngabarhwebi abasebenza kwimimandla elawulwayo banikezela amaqonga kunye neenkonzo zasemva kweofisi zabaphathi beengxowa-mali zeFX kunye nabaxhasi babo. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iimali zemali ezifumanekayo kuzo zonke iiarhente zabarhwebi. Nanku umzekelo oqikelelwayo: I-ABC yeFund yeNgxowa-mali inokucacisa kuphela ukurhweba kwabo ngeBig Forex Broker, kodwa hayi ngeBest Forex Broker; Ngenxa yoko, umthengi onqwenela ukuseka iakhawunti kunye neABC Forex Fund kuya kufuneka avule iakhawunti kunye neBig Forex Broker ukufikelela kumphathi wengxowa.
Nje ukuba umthengisi we-Forex akhethwe, iakhawunti iya kuvulwa kwaye ixhaswe ngemali. Emva koko, amaxwebhu achazayo izakujongwa kwaye ityikitywe ngumtyali mali. Igunya elinqongopheleyo legqwetha (i-LPOA) liyakufuna ukuba lisayinwe ngumtyali-mali ukuze anike umphathi we-Forex igunya lokuthengisa iakhawunti. Umtyalomali ngoku kufuneka abe nokufikelela kwingeniso yexesha langempela kunye neenkcazo zelahleko kunye nazo zonke iingxelo zokuphela kwemihla.
Ukulandela iNgxowa-mali ye-Forex emva kokwenza utyalo-mali.
The Utyalo-mali kwiNgxowa-mali inokubandakanya imihla ngemihla, ngeveki, ngenyanga, okanye ekujoliswe kuko ngonyaka. Ngokunjalo, intsebenzo yengxowa-mali kufuneka iphononongwe amaxesha ngamaxesha ukumisela ukuba intsebenzo iyahambelana na nolindelo lokuqala lomtyali mali. Le yindlela ebaluleke kakhulu yokunika ingxelo kubatyali zimali ukuba ngaba utyalomali luyaqhubeka na nolindelo lokuqala.
Ukuba intsebenzo yengxowa-mali ayihambelani nerekhodi yokwenyani okanye eyingqikelelo, utyalomali kufuneka aqhakamshelane nomphathi wengxowa-mali ukubuza ukuba kutheni kubekho utshintsho kwindlela yokusebenza. Izizathu ezinokubangela ukuba imbuyekezo zembali zingangqinelani nembuyekezo yangoku kubandakanya ukwanda kokungazinzi kwimarike okanye isiganeko esingalindelekanga sendawo. Ukuba umtyali-mali akanelisekanga yinkcazo yomphathi wengxowa-mali ngokubhekisele kwintsebenzo, umtyali mali kufuneka acinge ngokunciphisa utyalo-mali okanye akhuphe utyalomali ngokupheleleyo kwingxowa-mali ye-Forex.
Uncedo-mali lweNgcaciso kunye neeAkhawunti ze-Forex ezilawulwayo
Inkxaso mali eqokelelweyo ivumela… [Funda ngokugqithisileyo...]
Buyela phezulu kwiphepha
Ilungelo lokushicilela © 2021 · iprozi on Isiseko seGenesis · WordPress · Ngema
Sisebenzisa ii-cookies ukuqinisekisa ukuba sikunika amava afanelekileyo kwiwebsite yethu. Ukuba uqhubeka usebenzisa le ndawo siya kuthatha ukuba uyavuya ngayo.YamkelaUmthetho wabucala